Daani’eel Araap Mooy Prezdentiin Keeniyaa Lammataa ganna 95 tti addunyaa kanarraa du’aan boqotan
Faayilii - Pirezdantii Keeniyaa duraanii Daani’eel Araap Mooy
Pirezdantiin Keeniyaa duraanii Daani’eel Araap Mooy dhalatanii wagga 95 ffaa isaaniirratti du’aan boqotanii jiru. Mooyi yaala fayaarra utuu jiranuu lubbbuun isaanii darbuu maatiin isaanii beeksisanii jiru. Uhuuruu Keeniyaattaas biyaattii keessatti gadda labsanii jiru
Keeniyaa bara 1978 haga 2002 ka bulchaan prezdentiin biyyattii duraanii Daani’eel Tooroyitich Araap mooy harra du’aan lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarteetti.
Mizee Mooyi maqaa jedhuun ka beekaman Prezdenti Mooy, harra ganama hospitaala Naayroobitti yaala fudhataa utuu jiranuu lubbuun isaanii akka dabrte ilmi isaanii Geediyoon Mooyi dubbatanii jiru.
Write Your Quote Here ...Abbayyoonkoo harra ganama keessaa sa’aatii 11 fi walakkatti lubbuun isaa dabrte. Yoo lubbuun isaa dabartu an isa biran ture nagaadhumaan boqote. Akka maatiittis boqochuusaa fudhannee jirra. Yeroo kana maatii keenyaaf ka jajjabina hawwitan, ka nucinaa dhaabbattan lammilee Keeniyaa fi saba kaanis isin galateeffachuun barbaada
Daawwannaaf US ka jiran pirezdentiin biyyattii Uhuuruu keeniyaattaas gadda isaaniitti dhagayame ibsanii Mooy haga sirni awwaala isaanii raawwatamutti gadda labsanii jiru. Lammileen biyyattiis du’a Mooyi ilaalchisuun waa’ee nama ganna 24 f isaan gaggeesse kanaa yaada hedduun miidiyaalee hawaasaarratti wal mormaniiru. Kaan Mooy Keeniyaa gama bu’uraalee misoomaan nama jabeessan, manneen barnootaa ijoollee dubraa ijaaruun dubartootaaf carraa nama laatanii jechaan yoo leellisan, kaan ammoo lakki mooyi nama paartilee mormituu ciree balleessee mootummaa abbaa hirree dhaabee fi qabeenya biyyattiillee hedduu ka same jechaan ibsaniinii jiru.
Gaggeessitoonni biyyoottan gaanfa afrikaa akkasumas namootni siyaasaa hedduun gadda isaanii maatii Mooyiif dabarsanii jiru. Fonqolcha mootummaa bara 1982 mootummaa Mooyi fonqolchuuf turerratti hirmaachuun shakkamanii hidhaa ka turan Raaylaa Odiingaa Mooyi waliin araaramuu yoo himan, Muummeen Ministiraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmedis du’a mooyiin gadda itti dhagahame maatii fi lammilee Keeniyaaf ibsanii jiru.
Daani’eel Araap Mooy Hagayya bara 1981 haga hagayya 1983 hoogganaa Gamtaa Afriikaa ta’uun tajaajiluun isaanii ni yaadatama.
Proojektiin Annisaa Elektrikii Gannale Dawwaa 3ffaan Eebbifame
"Dhimmi Oromiyaa Lixaa Keessaa Karaa Nagaan Akka Xumuramu Feena Ka Muummichi-ministaraa Jedhan Dhugaan Lafa Qabatee Hojiitti Hiikamuu Qaba"
Namoota Vaayrasii Koronaan Shakkaman Qoratamaa Jiru: Ogeessa Fayyaa
Bulchiinsi Prezidaant Traamp Ertiraa Dabalatee Biyyoota Ja’a Irra Uggura Immigireeshinii Kaa’uu Isaa Beeksise